Gold Kid Syrup (Multiviatmin Syrup w/ Cod Liver Oil) – Online Myanmar Pharmacy
Gold Kid Syrup (Multiviatmin Syrup w/ Cod Liver Oil) - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
သားသားမီးမီးတို့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းမွန်ပြီး ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားစေဖို့ Gold Kid အားဆေးရည်ကို တိုက်ကျွေးကြပါစို့။
Gold Kid အားဆေးရည်တွင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဗီတာမင် ၈မျိုး နှင့် ငါးကြီးဆီ (Cod Liver Oil)တို့ အချိုးကျစွာဖော်စပ်ထားပါသည်။
ငါးကြီးဆီတွင် ပါ၀င်သော EPA , DHA နှင့် ALA (Omega-3 Fatty Acids) တို့သည် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဇီဝဖြစ်စဉ်များတွင် အထောက်အကူပြုခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အထူးမြှင့်တင်ပေးပါသည်။
Gold Kid အားဆေးရည်ကို ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားစကလေးငယ်များ၊ အစားအစာရွေးသော ကလေးငယ်များ နှင့် နာတာရှည် ရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရသူတို့တွင် တိုက်ကျွေးရန် အထူးသင့်တော်ပါသည်။
Goldkid syrup is indicated for the treatment and prevention of vitamin deficiencies associated with restricted diet, improper food intake and decreased absorption. It is also indicated for the children with increased requirement for vitamins due to acute and chronic diseases, growing children and anorexic children.